Kylian Mbappe Oo Farriin Daacadnimo Ah U Diray Cristiano
Kylian Mbappe oo adeegsanaya bartiisa bulshada ayaa farriin daacadnimo leh u diray xiddiga reer Portugal ee Crsitiano Ronaldo kaddib markii ay soo dhamaatay ciyaartii Nations League ee France iyo Portugal ay barbarraha goolal la’aanta ah ku kala baxeen.
Xulka qaranka difaacanaya Koobka Adduunka ee 2018 ee France iyo waddanka kusoo guuleystay Koobkii ugu horreeyey ee Nations League ee Portugal ayaa isku haleelay garoonka Stade de France ee magaalada Paris, halkaas oo ay ku sugnaayeen taageereyaal loo ogolaaday inay daawadaan ciyaarahan.
Labada waddanba waxay soo bandhigeen ciyaaar tayadeedu sarrayso oo ay goolal na ku dhalin karayeen laakiin waxay 90kii daqiiqadood ku dhamaysteen goolal la’aan 0-0 ah.
Kulankan oo labada waddanba ay kusoo galeen shax adag, waxa Faransiiska ugu soo bilowday ciyaartoyda sida Mbappe, Antoine Griezmann iyo Paul Pogba, halka Portugal ay safka hore kasoo muuqdeen Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva iyo sidoo kale Bruno Fernandes.
Labada ciyaartoy ee culayska ugu badan ciyaartan ku abuurayay waxay ahaayeen Mbappe iyo Ronaldo oo si gaar ahna ay u hayeen indhaha dunidu.
Mbappe oo ay da’diisu tahay 21 jir oo lagu tilmaamo ciyaartoyga ugu qiimaha badan dunida waqtigan, isla markaana da’yaraan ugula guuleystay Koobka Adduunka waddankiisa, ayaa waxa la rumaysan yahay inuu xiddignimada dunida ku guuleysan doono, halka Ronaldo uu shan jeer soo qaatay.
Laacibka reer Portugal ee 35 jirka ayaa waqtiyo cajiib ah kusoo qaatay Premier League, LaLiga iyo Serie A oo uu hadda joogo, waxaana raadkiisa oo kale haya Mbappe oo waqti cajiib ah ku qaatay PSG laakiin la sheegayo in sannadaha soo socda uu horyaallada waaweyn ee Yurub uga wareegi doono, gaar ahaan LaLiga ama Premier League.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, waxay Ronaldo iyo Mbappe isku sii salaameen garoonka dhexdiisa iyagoo isweydaarsaday hadal keenay inay labadooduba qosol muunsoodaan oo ay doola-caddeeyaan.
Markii ay garoonka ka tageen ayuu Mbappe bartiisa Twitterka soo dhigay sawirka ay wada galeen Ronaldo, waxaanu kusoo dul qoray kelmad kooban oo daqiiqado gudahood ay ka falceliyeen in ka badan 250 kun oo qof, sidoo kalena ay 50 kun oo qof sii wadaageen.
Kelmadda kooban ee uu Mbappe ka yidhi Ronaldo ayaa ahayd: “Waa laacibka aan ku daydo”.
Soo bannaan-bixinta Calanka Soomaaliya oo maanta laga joogo
Ciidamada DFS oo howlgal ka sameeyay Degmada Baladxaawo. –